१३औं सागको तयारी पूरा : राष्ट्रपतिबाट उद्घाटन
१३औं दक्षिण एशियाली खेलकूद (साग) उद्घाटन समारोहका लागि काठमाडौंको दशरथ रंगशालामा शुक्रवार गरिएको पूर्वअभ्यास ।
काठमाडौं । १३ औं दक्षिण एशियाली खेलकुद (साग) प्रतियोगिताको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)का अनुसार त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशालामा आइतवार साँझ ५ बजे राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सागको भव्य समारोहका बीच उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । राखेपका प्रशासन प्रमुख कुलबहादुर थापाले नेपाली मौलिकता झल्किने गरी सागको उद्घाटन समारोह आयोजना गरिन लागेको बताए । ‘सबै खेलका लागि आवश्यक संरचना निर्माण र उद्घाटन भव्य बनाउने सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ,’ उनले भने ।
दक्षिण एशियाका ७ मुलुक नेपाल, भारत, भुटान, पाकिस्तान, श्रीलंका, बंगलादेश र माल्दिभ्सको सहभागिता रहने १३आंै सागको उद्घाटन समारोहमा सशस्त्र प्रहरी बलका ४ हजार ५००, सेनाका १ हजार ५०० र झाँकी समूहका ४ हजार कलाकारले नेपाली कला/संस्कृति झल्किने प्रस्तुति दिने कार्यक्रम रहेको छ ।
नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अनुसार नेपालका तर्फबाट भारोत्तोलन खेलाडी कमल अधिकारीले राष्ट्रिय झन्डा समातेर मार्चपासको नेतृत्व गर्नेछन् । राखेपका अनुसार सागको उद्घाटन समारोह ३ घण्टा ४० मिनेट लामो हुनेछ ।
१३औं सागमा २८ खेल समावेश छन्, जसमध्ये जनकपुरमा एक र पोखरामा ८ खेल हुनेछ भने बाँकी काठमाडौंमा गरिँदै छ । फेन्सिङ र विच भलिबललाई १३औं सागमार्फत पहिलोपटक सागमा नयाँ खेलका रूपमा समावेश गरिएको छ ।
विस २०४१ मा नेपालबाटै शुरू भएको साग तेस्रोपटक नेपालमा आयोजना हुन लागेको हो । सागको संस्थापक सदस्य नेपालले यसअघि २०४१ र २०५६ सालमा गरी दुईपटक सागको आयोजना गरिसकेको छ ।
यसअघि २०५६ असोजमा ८औं साग काठमाऔंमा आयोजना गरिँदा नेपाल ३१ स्वर्ण जित्दै दोस्रो स्थानमा रहेको थियो । त्यतिबेला १३ ओटा खेल प्रतियोगितामा समावेश गरिएका थिए । आयोजकका अनुसार यसपटक ३ हजारभन्दा बढी खेलाडी सागमा सहभागी हुँदै छन् जसले ३२४ स्वर्ण, त्यति नै रजत र ४७८ कांस्य पदकका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् ।
१३औं सागका लागि नेपाल सरकारले करीब साढे ४ अर्ब रुपैयाँको बजेट निकासा गरेको छ । राखेपका अनुसार खेल पूर्वाधार निर्माणका लागि रू. १ अर्ब ६२ करोड तथा प्रतियोगिता आयोजनाको निम्ति रू. ३ अर्ब ६५ करोड बजेट रहेको छ ।
खेल अवधिभर नेपाल प्रहरीले सुरक्षा दिनेछ । प्रहरीका प्रवक्ता उत्तमराज सुवेदीले आवश्यकता अनुसार प्रहरी परिचालन गरी खेल व्यवस्थापन र खेलाडीलाई आवश्यक सुरक्षा दिइने बताए । ‘खेलाडीलाई एस्कर्टिङ गरेर होटल, खेल मैदानदेखि आवश्यक स्थानसम्म लगिने तयारी गरिएको छ,’ उनले भने, ‘खेल अवधिभर सबै खेलाडीको आवश्यक सुरक्षाका लागि प्रहरी परिचालन गर्ने तयारी गरेका छौं ।’